Ukuqalisa i-iPhone X, i-MacOS beta 4 kunye ne-5, iiMacs ngo-2018 nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Ukuqalisa i-iPhone X, i-MacOS beta 4 kunye ne-5, iiMacs ngo-2018 nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
UJordi Gimenez | | iapile, Ezahlukeneyo
Le veki iphawulwe ngokupheleleyo ukumiliselwa kwemodeli entsha ye-iPhone X kwaye kukuba ukubhukisha kuqale ngolwesiHlanu odlulileyo, nge-27 ka-Okthobha, emva kwengxelo yayo esemthethweni eSteve Jobs Theatre, eApple Park. Ngale ndlela, into ekufuneka siyithethile malunga nokubhukisha kukuba bezingalunganga ngokulinganayo kubo bonke abo bafuna ukuthenga imodeli entsha ye-Apple, kwaye abanye abasebenzisi banamaxesha okuhanjiswa phakathi kweeveki ezi-5-6.
Ngayiphi na imeko kukho iindaba ezingakumbi ngaphandle kokuqala kokubhukisha kwe-iPhone X entsha kwaye yile nto sifuna ukwabelana ngayo nani nonke. Ezinye zeendaba ezivela kwihlabathi leApple bezilungile kwaye Ndivela eMac sifuna ukwabelana ngeyona ibalaseleyo.
Okokuqala, kufuneka sithethe malunga neenguqulelo ezimbini ze-beta ezazisungulwa ngu-Apple kule veki kubavelisi be-MacOS. Eyokuqala yayi I-beta 4 yakhutshwa ngomvulo kwaye ndongeze i Lungisa umngcipheko omkhulu ovele kutshanje Umgangatho weWPA2 weWi-Fi, Inguqulelo yesibini yeveki yayi Inguqulelo yesi-5 ye-beta ye-MacOS ePhakamileyo yeSierra kwaye yongeza ukulungiswa kwe-bug okuqhelekileyo kwaye sicinga ukuba ukuphuculwa okuthile okanye ukulungiswa kwenguqulelo yangaphambili.
Kwiiforamu ezininzi kusithiwa iApple izakwenza into entsha etafileni malunga nomxholo weMac, kwaye kunokwenzeka ukuba I-Apple isuka kumfutho onamandla kunyaka olandelayo. Esi sisihemuhemu esiya kuthi ekugqibeleni siphele siyinyani ukuba sijonga iinkcukacha. Kule nto kuyakufuneka silinde ithutyana, kodwa hayi ixesha elide ukusukela oko Unyaka olandelayo kufuneka ube ngunyaka weeMacs.
Isithuthuthu kunye neCarPlay, Le yenye yeendaba ezibalulekileyo zeveki. Inkqubo ye- IHonda Goldwing 2018 iya kuba sisithuthuthu sokuqala ukubheja kwinkqubo yeApple CarPlay. Imodeli ye-Honda iya kudibanisa isikrini sokuchukumisa esi-7-intshi apho ulwazi oluncedo olufana neMephu, Abafowunelwa kunye noMculo ziya kunikwa.
Kukho isivumelwano phakathi kweWalmart kunye neApple ukuze Bonke abasebenzi kwikhonkco lokubonelela, basebenza ngeMac ukuqala kunyaka ozayo. Ngokwenyani, malunga nabasebenzi abangama-7.000 bane-Mac njengovavanyo lokulinga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ukuqalisa i-iPhone X, i-MacOS beta 4 kunye ne-5, iiMacs ngo-2018 nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
I-Apple izisa iiMacs ezihlaziyiweyo kwintengiso, ukuqala nge $ 799